2013 Dhijitari Kushambadzira Pulse Kudzidza | Martech Zone
Tiri kupwanyika. Kushaikwa kwehunyanzvi uye kurovedzwa, kusarongeka kwemaumbirwo emasangano nemaitiro, uye miitiro yakadzika midzi yenhaka vari kuremadza vatengesi mazuva ano. Zvishandiso uye matekinoroji ari kuchinja uye kubuda vhiki yega yega - asi hazvina kukwana. Ichi chikonzero chakakonzera kuti titange DK New Media… Vatengi vedu vanongoda kukwidziridzwa kuti ivabatsire kuenda kumberi uye nekunyatso shandisa yavo yekushambadzira bhajeti pamazano.
Iko kunzwisisika muchinyorwa chino kwakatorwa kubva muchiitiko chakanangana nekushanda nevatengesi vemakambani nevatengesi, ongororo yakawandisa yevatungamiriri vangangosvika mazana maviri vekutengesa (Finch Brands uye Netplus Dhijitari Pulse Kudzidza, Nyamavhuvhu 2013), uye nhevedzano yebvunzurudzo nevanhu vanoshanda munzvimbo ino zuva nezuva. Zvakawanikwa zvakanyatsoratidza kuti yave nguva yekuti vatengesi varegedze kunyepedzera kuti zvese zviri pasi pekutonga. Kubudirira kana kukundikana kwemhando yavo kunoenderana nazvo.
Chii icho timu yako iri kunetseka nacho? Uri kukunda sei matambudziko aya? Verenga kuburikidza neNetplus chinyorwa kune zvavo zvisarudzo.
Tags: digital advertisingdijitari rekushambadzira kudzidzafinch pezvitsigakutsvagisa kwekushambadzirakuongorora kwekushambadziranet kuwedzera